Flies in the Ointment – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 11 October 2010 18 October 2010 Categories Recounts, Reproduction
6 thoughts on “Flies in the Ointment”
လောကမှာ ကိုယ့်ကို အိမ်သာလို သဘော ထားတဲ့ သူတွေ တပုံကြီးပဲ….။ လိုချင်တာလေး ရှိရင် အမြီးလေး တနန့်နန့်နဲ့..။
ဒါနဲ့…. ပါလေရာဖုန်းက SMS (message) ပို့ မရလို နေမယ်နော်….။ ပထမ အရင် SMS ပို့ ပြီးမ ခေါ် ပြောမယ် ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေ မယ်ထင်ပါရဲ့…။
ဂျာနယ်တွေအများကြိးထွက်လာတော့ ၀မ်းသာစရာပါ…သတင်းထောက်ကောင်းတွေရှားပါးနေတာကတော့ အတော်
11 October 2010 at 7:39 pm
သူမလည်း အလုပ်မှာ အထက်လူကြီးက အရမ်းဖိအားပေးလို့ နေမှာပေါ့…။
လေးစားအပ်သော လူကြီးမင်းများအလယ် ကြားညပ်ခြင်း
သူမ မှန်တယ်လို့တော့ မပြောပါရှင်..။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒေါ်မိယု။ ဒေါ်မိယု ပြောတာ အလွန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ “သူမ”နဲ့ တိုက်ရိုက်ဖြစ်လိုက်ရတာမို့ သူ့ကို ဦးတည်လိုက်ရပေမယ့် တကယ်တော့ အဲဒီ့ ဂျာနယ် ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ မချေငံနေတာ အတော်ကြာပါပြီ။ ငါတို့က ဧရာမ ဂျာနယ်ကြီးပဲဆိုတဲ့ အပေါက်မျိုး ချိုးနေတယ်လို့ ခံစားရတာ ဆယ်နှစ်မကတော့ဘူး။ အဓိကက အဲဒီ့ဂျာနယ်ကို ပြောချင်တာပါ။ ဟိုကလေးမက ဓားစာခံဖြစ်သွားရရှာတာပါ။ အဲဒီ့ကလေးမအပေါ်လည်း မငြိုငြင်မိရိုး အမှန်ပါ။ နီးရာဓား ကြောက်ရတဲ့ သူ့အနေအထားကို စာနာလို့ ရပါတယ်။
11 October 2010 at 8:43 pm
အိမ်သာလိုသဘောထားတယ် ဆိုတဲ့အသုံးအနုန်းလေးကို ကြိုက်တယ်ဗျာ….ကျနော်လည်းအိမ်သာလိုမျိုး အသုံးချခံရတာတွေရှိတယ်ဗျာ…ပြောမယ့်စကားလုံးကရှာမတွေ့တာ…ဆရာ့စာဖတ်မှ သိတာ…နောက်ဆိုပြောမယ်ဗျာ….ဆရာ့စာတွေကို အမြဲစောင့်ဖတ်လျက်…….
တစ်ခါတစ်လေကျရင် ဂျာနယ်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေဆိုတာ ဘယ်လိုဘယ်လို အသစ်ထွက်လာမှန်းကို မသိဘူးလို့ ခံစားရတယ်။ များလွန်းလို့။ ပြီးတော့ အယ်ဒီတာကိုယ်တိုင်ကတောင် စာလုံးမှန်အောင်မပေါင်းနိုင်တာမျိုးတွေ့ရင် တချို့တကယ်တော်တဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေကို အားနာပေမဲ့ ဘယ်လိုလူတွေများ စာနယ်ဇင်းလုပ်နေကြလဲမသိဘူးလို့ အံ့သြမိပါတယ်။ (ရှင်းရှင်းပြောရရင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတက္ကသိုလ်မဟုတ်တဲ့ ကျောင်းပြီးထားတဲ့ သူတွေက အလုပ်ရှာမရရင် ဂျာနယ်လစ်ဝင်လုပ်နေလားလို့တောင် တွေးမိတယ်၊ တကယ်လည်း အဲလိုလူတွေ တွေ့ဖူးနေတာကိုး)။
Previous Previous post: Nails of Friendship
Next Next post: After You by U Hpone (Datu)